I-Dulcolax vs. Miralax: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe - Iziyobisi Vs. Umhlobo | Eyenkanga 2021
Imidlalo Enzima Cinezela Uluntu, Inkampani Impilo Iindaba Inkampani, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi Inkampani Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Uluntu, Impilo Imidlalo Inkampani, Ukuphuma Ukuzonwabisa Imfundo Yezempilo, Impilo Iziyobisi Vs. Umhlobo
Eyona >> Iziyobisi Vs. Umhlobo >> I-Dulcolax vs. Miralax: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Dulcolax vs. Miralax: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Ukujonga ngokubanzi iziyobisi kunye nolwahluko ophambili | Imiqathango iphathwe | Ukusebenza | Ukuhlawulwa kwe-inshurensi kunye nokuthelekiswa kweendleko | Imiphumela | Ukusebenzisana kweziyobisi | Izilumkiso | FAQ
Ukuba ulwa nobunzima, izitulo ekunzima ukuzidlula, kunye / okanye ungaphantsi kwesithathu sokuhamba kwamathumbu ngeveki, kunokwenzeka ukuba ujongana nokuqunjelwa. Ukuqhinwa yi ixhaphake kakhulu Ingxaki eMelika, ichaphazela abantu abadala abali-16 kwabali-100, nabantu abadala abangama-33 kwabali-100 abaneminyaka engama-60 nangaphezulu.
I-Dulcolax kunye neMiralax zizinto ezimbini ezithandwayo, i-FDA evunyiweyo kwi-counter-the-counter laxatives esetyenziselwa ukunyanga ukuqhina ngamanye amaxesha kunye nokungahambi kakuhle. I-Dulcolax iqulethe i-bisacodyl, i-laxative evuselelayo. Isebenza ngokwandisa umsebenzi wamathumbu ukubangela intshukumo yamathumbu.
I-Miralax iqulethe i-polyethylene glycol 3350, i-osmotic laxative. Isebenza ngokutsala amanzi kwikholoni, ethambisa izitulo kwaye ibenze ukuba kube lula ukudlula. Omabini la mayeza ayaziwa njenge-laxatives kwaye anceda ukunyanga ukuqhina. Nangona kunjalo, banomahluko othile. Qhubeka ufunda ukuze ufunde ngakumbi ngeDulcolax kunye neMiralax.
Nguwuphi umahluko ophambili phakathi kweDulcolax neMiralax?
I-Dulcolax (i-Dulcolax coupons | Iinkcukacha ze-Dulcolax) sisiyobisi esishukumisayo esifumaneka kwi-brand kunye ne-generic, kwaye kwithebhulethi kunye nefom ye-rectal suppository, enesithako se-bisacodyl. I-Dulcolax njengegama lophawu ikwafumaneka kwezinye iindlela ezahlukeneyo, ezingenayo i-bisacodyl, enje nge-liquid kunye ne-chews ethambileyo (equlathe i-magnesium) kunye ne-stool softener (equlathe i-sodium ye-docusate). Ukulungiselela olu phononongo, siza kugxila kwiDulcolax, equlathe i-bisacodyl.
I-Miralax (Miralax coupons | Miralax details) s i-osmotic laxative equlathe isithako i-polyethylene glycol 3350. Iyafumaneka ngophawu ne generic, ngomgubo kunye ne powder powder form. Unokubona kwakhona iGavilax, efanayo neMiralax.
Umahluko ophambili phakathi kweDulcolax kunye neMiralax
Iklasi yeziyobisi I-laxative ekhuthazayo I-Osmotic laxative
Uhlobo lweBrith / generic Brand kunye generic Brand kunye generic
Ngubani igama eliqhelekileyo? IBisacodyl I-Polyethylene glycol 3350 powder
Zeziphi iifom eza nalo iziyobisi? YeCwecwe (Dulcolax, Dulcolax Pink), suppository
Olunye uhlobo lweDulcolax lubandakanya:
Ulwelo lweDulcolax, iDulcolax Soft Chews (ine-magnesium, hayi i-bisacodyl)
I-Dulcolax stool softener (iqulethe i-sodium ye-docusate) Umgubo, iipakethi zomgubo
Ithini idosi esemgangathweni? Ukuqunjelwa:
Iipilisi ezi-1 ukuya kwezi-3 kwidosi enye yemihla ngemihla yabantu abadala kunye nabantwana abali-12 nangaphezulu.
Ithebhulethi enye kwidosi enye yemihla ngemihla yabantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 ubudala.
1 suppository kwidosi enye yemihla ngemihla yabantu abadala kunye nabantwana abali-12 nangaphezulu.
Umfaki sicelo akanakusetyenziswa kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 ubudala.
Umboneleli wakho wezempilo uya kukubonelela ngemiyalelo. Ukuqunjelwa:
Iigram ezili-17 (okanye imixholo yepakethi enye, ukuba usebenzisa ipakethi) ixutywe kwii-ounces ezi-4 ukuya kwezi-8 zesiselo. Gquba kwaye unyibilike, kwaye usele kube kanye yonke imihla ukuya kwiintsuku ezisi-7.
Umboneleli wakho wezempilo unokubonelela ngemiyalelo.
Lude kangakanani unyango oluqhelekileyo? Ukufikelela kwiintsuku ezisi-7, ukusetyenziswa maxa wambi Ukufikelela kwiintsuku ezisi-7, ukusetyenziswa maxa wambi
Ngubani oqhelekileyo usebenzisa amayeza? Ithebhulethi: Abantu abadala nabantwana abaneminyaka eyi-6 nangaphezulu
Ukuxhaswa: Abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-12 nangaphezulu Abantu abadala abaneminyaka eli-17 nangaphezulu
Ngaba ufuna elona xabiso lilungileyo kwi-Miralax?
Bhalisela izilumkiso zamaxabiso eMiralax kwaye ufumane ukuba amaxabiso atshintsha nini!
Fumana izilumkiso zamaxabiso
Iimeko eziphathwe nguDulcolax kunye neMiralax
Iipilisi ze-Dulcolax kunye ne-suppositories zisetyenziselwa isiqabu sexeshana sokuqhinwa kunye nokungahambi kakuhle. Amacwecwe avelisa intshukumo kwiiyure ezintandathu ukuya kwezili-12, kwaye ii-suppositories zisebenza ngokukhawuleza, zivelisa intshukumo kwimizuzu eli-15-60.
I-Miralax ikwaboniswa ukuba isiqabu sokuqhinwa ngamanye amaxesha kunye nokungahambi kakuhle kwaye kuvelise intshukumo kusuku olunye ukuya kwiintsuku ezintathu.
I-Dulcolax okanye i-Miralax zihlala zisetyenziselwa ukulungiswa kwamathumbu enkqubo, njenge-colonoscopy. Xa ulungiselela inkqubo, ugqirha wakho wotyando uya kukunika uluhlu lokutya kunye neziselo (ezinje ngeGatorade) onokuyitya ngokutya okucacileyo okungamanzi, kunye nenkqubo yokulungiselela amathumbu.
Imeko Dulcolax Miralax
Uncedo lwethutyana lokuqhinwa kunye nokungahambi kakuhle Ewe Ewe
Ukulungiselela amathumbu ngenkqubo Ewe Ewe
Ngaba iDulcolax okanye iMiralax isebenza ngakumbi?
Izifundo khange zithelekise iintloko ezimbini zentloko ziye kunyango lokuqhinwa ngamanye amaxesha. Ke ngoko, xa uthatha isigqibo sokuba leliphi iyeza oza kuzama ngalo, unokujonga izinto ezimbalwa. Okokuqala, uya kufuna ukucinga malunga nendlela ofuna ngayo ukuya kwindlu yangasese. Ngaba awonwabanga kwaye ufuna ukuhamba ngokukhawuleza okukhulu? Okanye ngaba ukhetha ukubanomoya olunge ngakumbi, okomzuzwana? Ukujonga le nto, iipilisi zeDulcolax ziya kusebenza malunga neeyure ezintandathu ukuya kwezili-12, ngelixa ii-suppositories ziya kusebenza ngokukhawuleza, ngaphakathi kweyure.
I-Miralax ingathabatha usuku ukuya kwiintsuku ezintathu ukuvelisa intshukumo. Uya kufuna kwakhona ukuqaphela uhlobo lwamayeza. Ngaba ukhetha ithebhulethi, umgubo oxutywe kulwelo, okanye i-suppository? Ukuba unokhetho oluluqilima kuhlobo lonyango onokuthi ulunyamezele, oko kunokuba nakho. Kwakhona, kunokuthatha uvavanyo kunye nephutha ukufumana ukuba iDulcolax okanye iMiralax isebenza ngcono kuwe.
Kuhlala kungumbono olungileyo ukuxoxa ngeendlela zonyango kunye nomboneleli wakho wezempilo. Ufanelekile ukukunceda uthathe isigqibo sokuba loluphi unyango oza kuzama ngalo, uthathela ingqalelo imbali kunye neemeko zonyango lwakho, kunye nawo nawaphi na amayeza owathathayo anokusebenzisana neDulcolax okanye iMiralax.
Ukufunyanwa kunye nokuthelekiswa kweendleko zeDulcolax vs Miralax
Ngenxa yokuba bephezu kwe-counter, i-Dulcolax kunye ne-Miralax zihlala zingagqitywanga yi-inshurensi okanye i-Medicare Part D. Ezinye iimeko zingafaka isicelo, umzekelo, isicwangciso seMedicaid sikarhulumente. Kananjalo unokukwazi ukusebenzisa ikhadi lakho lokugcina ukonga impilo yakho ukuhlawulela la mayeza e-OTC.
Ixabiso eliqhelekileyo lokuphuma epokothweni lebhokisi yamacwecwe e-generic e-Dulcolax amalunga ne- $ 8, kwaye ibhokisi yee-suppositories ikwa- $ 8. Ixabiso eliphuma epokothweni lebhotile ye-generic Miralax limalunga ne- $ 23.
Ungagcina imali kwi-Dulcolax (iitafile okanye ii-suppositories) okanye iMiralax ngekhadi le-SingleCare. (Qaphela-nangona omabini la machiza ene-OTC, amayeza ayafuneka ukuze ugqitywe nge-SingleCare. Landela nje amanyathelo Apha .)
Fumana ikhadi lesaphulelo esisodwa
Ngokuqhelekileyo i-inshurensi? Hayi Hayi
Ngokuqhelekileyo ihlanganiswe yiCandelo le-Medicare? Hayi Hayi
Umthamo osemgangathweni Ibhokisi yeepilisi ze-5 mg (# 30) okanye ibhokisi ye-10 mg suppositories (# 12) Ibhotile e-1 iqulethe iidosi ezingama-30
Uhlobo oluqhelekileyo lweMedicare Part D N / A N / A
Ixabiso elilodwa Amacwecwe: $ 3
Izixhobo: $ 7 $ 10
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zeDulcolax vs Miralax
Iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo zeDulcolax zibandakanya isicaphucaphu, ukugabha, urhudo, kunye necramps zesisu. Ukuba usebenzisa le fom yokuxhasa, unokuziva ukuba unochuku lwasekhaya. Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zinokubandakanya ukungalingani kwe-electrolyte (iimpawu zinokubandakanya ukuncipha komchamo, ukudinwa / ubuthathaka, ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga, isiyezi, ukuphelelwa ngamandla, kunye / okanye ukudideka) okanye ukulahleka komsebenzi wekolon, emva kokuthatha iDulcolax ixesha elide. Ukuba usabanjiwe emva kokusebenzisa iDulcolax kangangeentsuku ezisixhenxe, nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo. Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngoko nangoko ukuba ufumana naziphi na iziphumo ezibi kakhulu.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zeMiralax zibandakanya isicupunu, ukuxinwa kwesisu kunye negesi. Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zinokubandakanya ukushukuma okugqithisileyo kwamathumbu, isifo sohudo esiqhubekayo, iintlungu zesisu esibuhlungu, izitulo ezinegazi, okanye ukopha ngamacala omzimba. Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngoko nangoko ukuba ufumana nayiphi na imiphumo emibi.
Nokuba leliphi na ichiza, kunqabile kodwa kuyenzeka ukuba uxabane ungenzeki. Ukuba ufumana ukurhawuzelelwa / ukudumba kobuso, ulwimi, okanye umqala, okanye unengxaki yokuphefumla, funa unyango kwangoko.
Ukudibana kweziyobisi zeDulcolax vs. Miralax
I-Dulcolax akufuneki ithathwe ngaphakathi kweyure enye ye-antacids ezinje ngeTum okanye iRolaids, okanye iproton pump inhibitors, kuba indibaniselwano inokunyusa umngcipheko wesisu kunye nezinye iziphumo ebezingalindelekanga. I-Dulcolax akufuneki ithathwe nezinye i-laxatives ezikhuthazayo kuba indibaniselwano inokunyusa umngcipheko wezilonda okanye isifo sokukrala.
I-Miralax ayifanele ithathwe kunye Linzess kuba indibaniselwano inokunyusa umngcipheko wokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokungaqheleki kwe-electrolyte. IMiralax nayo akufuneki ithathwe kunye neTrintellix okanye Fetzima kuba indibaniselwano inokunyusa umngcipheko we-SIADH okanye isodiyam ephantsi.
Olu ayilo luhlu lupheleleyo lokunxibelelana kweziyobisi. Olunye unxibelelwano lweziyobisi lunokwenzeka. Nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo uluhlu olupheleleyo lokudibana kwamachiza.
Iziyobisi Iklasi yeziyobisi Dulcolax Miralax
Ubisi lukaPhillips lwaseMagnesia
Tums IiAntacids Ewe Hayi
IProtonix Impompo Proton inhibitors Ewe Hayi
Senna / Senokot I-laxatives ekhuthazayo Ewe Hayi
Iranididine Ibhlokhi ye-H2 Ewe Hayi
Ukutsala Unyango lwe-IBS Hayi Ewe
I-Trintellix I-SSRI yoxinzelelo Hayi Ewe
Fetzima I-SNRI yoxinzelelo Hayi Ewe
fitter I-Anticonvulsant Hayi Ewe
Izilumkiso zeDulcolax kunye neMiralax
Kuhlala kungumbono olungileyo ukudibana nogqirha we-gastroenterology (i-gastroenterologist) ukuba uhlangabezana neengxaki zesisu, ngakumbi ukuba zihlala zikhona okanye zinganyangeki. I-gastroenterologist inokwenza umsebenzi opheleleyo kunye novavanyo, ukumisela ukuba ngaba unazo naziphi na iimeko ezibangela ukuqhina okufuna ukunyangwa.
Buza umboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa ukuba uneentlungu esiswini, isicaphucaphu, ukugabha, okanye utshintsho olukhawulezileyo kwimikhwa yamathumbu ehlala ngaphezulu kweentsuku ezili-14.
I-Dulcolax inokubangela ukungonwabi esiswini, ukuphelelwa ngamandla, ukutshiswa kwamatye, kunye nokuxinana kancinci.
Yeka ukusebenzisa i-Dulcolax kwaye uqhagamshelane nomboneleli wakho wezononophelo lwempilo ukuba uphuma ngokuthe ngcembe okanye akukho ntshukumo yamathumbu emva kokusebenzisa iDulcolax. Oku kunokubonisa imeko ebaluleke ngakumbi. Kwakhona, qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ukuba unesifo esingapheliyo okanye ufuna ukusebenzisa i-laxative ngaphezu kweentsuku ezisixhenxe.
Izincedisi zenzelwe ukusetyenziswa kwamacandelo kuphela.
Ukuba uthatha iipilisi, musa ukuhlafuna okanye ukutyumza. Musa ukuthatha kwiyure enye ye-antacids okanye ubisi.
Sukuyisebenzisa ukuba uxabisa i-polyethylene glycol.
Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa ukuba unesifo sezintso.
Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa ukuba unesicaphucaphu, ukugabha, iintlungu zesisu, utshintsho ngesiquphe kwimikhwa yamathumbu ehlala ngaphezulu kweentsuku ezili-14, okanye isifo esiswini esinomsindo (IBS).
Xa usebenzisa iMiralax, unokuba nezihlalo ezivulekileyo okanye ezinamanzi okanye izitulo eziqhelekileyo.
Yeka ukusebenzisa i-Miralax kwaye uqhagamshelane nomboneleli wakho wezononophelo lwempilo xa uphuma emacaleni, okanye iimpawu ezixhalabisayo zesicaphucaphu, ukuqunjelwa, ukubamba, okanye iintlungu esiswini. Oku kunokubonisa imeko ebaluleke ngakumbi. Yeka nokusebenzisa iMiralax kwaye uqhagamshelane nomboneleli wakho wezempilo ukuba uhambisa urhudo, okanye ukuba ufuna ukusebenzisa i-laxative ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe.
Izilumkiso zeDulcolax kunye neMiralax:
Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa ukuba ukhulelwe okanye uncelisa.
Ukusetyenziswa ixesha elide kwe-laxatives kungakhokelela kukungalingani kwe-electrolyte, okunokuba yingozi kakhulu. Qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ukuba ukuqunjelwa kwakho kuyaqhubeka ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neDulcolax vs. Miralax
I-Dulcolax yinyango ye-OTC equlathe i-bisacodyl, isisu esikhuthazayo. Iyafumaneka kwi-brand kunye ne-generic nakwithebhulethi okanye kwifom yokuxhasa. Indawo yokugcina izinto isebenza ngokukhawuleza, ivelisa intshukumo ngaphakathi kwemizuzu eyi-15-60, kwaye iipilisi zithatha iiyure ezintandathu ukuya kwezilishumi elinambini ukusebenza.
Yintoni iM Miralax?
I-Miralax yonyango lwe-OTC oluqukethe i-polyethylene glycol 3350, i-osmotic laxative. Itholakala kwi-brand kunye ne-generic kwifom ye powder. I-Miralax kufuneka ivelise intshukumo ngaphakathi kwentsuku ezintathu.
Ngaba i-Dulcolax neM Miralax ziyafana?
Omabini la mayeza ngamayeza okuthambisa, kodwa ziindidi ezahlukeneyo zelaxatives kwaye zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Jonga ngaphezulu ngolwazi oluthe kratya malunga neDulcolax neMiralax. Kukho ezinye iindidi ze-laxatives, xa kuthelekiswa kwitshathi engezantsi.
Uhlobo lwe-laxative Umzekelo Kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza?
I-laxative ekhuthazayo Ukulungisa
Senna / Senokot Ithebhulethi: iiyure ezi-6 ukuya kwezi-12
Suppository: 15-60 imizuzu
I-Osmotic laxative Miralax Iintsuku 1-3
Isaline laxative I-Enema yeFleet yeSaline
Ubisi lukaPhillips lwaseMagnesia Iiyure eziyi-6
(IFleet Saline Enema ithatha imizuzu emi-1-5)
Isithambiso sokuthambisa Ioyile yezimbiwa Iiyure eziyi-6-8
Isitayile sithambisa Isonka (docusate sodium okanye Surfak) Iiyure 12-72
Iipilisi zokuhambisa ezenziwe ngobuninzi Ifayibha izongezo ezifana
IFiberCon (calcium polycarbophil)
I-Metamucil (i-psyllium husk) Iiyure 12-72
Ngaba i-Dulcolax okanye i-Miralax ibhetele?
La mayeza mabini awathelekiswanga kuvavanyo lweklinikhi. Unokufuna ukuthathela ingqalelo uhlobo lonyango oluthandayo (ithebhulethi, i-suppository, okanye umgubo oxutywe kulwelo) kunye nendlela ongathanda ukuya kuyo kwigumbi lokuhlambela. Umzekelo, ukuba awonwabanga kwaye ufuna ukuya kwigumbi lokuhlambela ngokukhawuleza, kwaye ungakhathazeki ngokufaka i-rectal suppository, i-Dulcolax suppository iya kuba nawe kwigumbi lokuhlambela ngaphakathi kweyure.
Ndingayisebenzisa iDulcolax okanye iMiralax ngelixa ndikhulelwe?
Ukuba kunjalo ukhulelwe okanye ukuncancisa, nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba usebenzise i-laxative.
Ngaba ndingasebenzisa iDulcolax okanye iMiralax ngotywala?
Utywala bunokubi kukuqunjelwa. Ukuba ufumana ukuqhina, kufuneka uphephe utywala. Kwakhona, utywala bunokuzenzakalisa iziphumo ebezingalindelekanga, ezinjengokuqunjelwa, isicaphucaphu, iintlungu zesisu, kunye / okanye ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni.
Yintoni eyomeleleyo kune Miralax?
Jonga itshathi yokuhambisa isisu ngasentla. Kukho ezinye i-laxatives ezinokusebenza ngokukhawuleza kune-Miralax ukuba ufuna into ukuze usebenze ngokukhawuleza.
Yeyiphi eyona laxative isebenza ngokukhawuleza?
I-Enema yeFleet Saline inokuvelisa intshukumo yamathumbu ngokukhawuleza njengomzuzu omnye okanye emihlanu. I-Dulcolax suppository inokuvelisa intshukumo kwimizuzu eyi-15-60. I-laxative yetyuwa, enjenge-magnesium citrate, inokuvelisa intshukumo yamathumbu kwisiqingatha seyure ukuya kwiiyure ezi-6. Kuxhomekeke kukhetho lwakho (i-enema, i-suppository, okanye i-liquid) kunye nenqanaba lakho lokungonwabi, unokukhetha enye yezi, kwaye kufuneka isebenze ngokukhawuleza okukhulu.
Ungathatha iMiralax yonke imihla?
I-Miralax ingathathwa ngamanye amaxesha ukunyanga ukuqhina, kodwa akufuneki isetyenziswe ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe. Ukuba usebenzisa iMiralax iintsuku ezisixhenxe, kwaye uziva ngathi kufuneka uyisebenzise, ​​nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ukuze akukhokele. Unokufuna ukubona ingcali yesisu ebizwa ngokuba yi-gastroenterologist, enokwenza umsebenzi opheleleyo, kubandakanya ukwenza uvavanyo / ukusebenza kwegazi, ukwenza iingcebiso ekwandiseni ifayibha yokutya, kunye nokuvavanya amayeza owathathayo ukubona ukuba kubangela ukuqhina .
Esona sidlo sise diverticulitis esifanelekileyo: Ukutya oku-5 ukutya kunye no-5 ukunqanda
Ungasiphepha njani-okanye usiphathe-
bangaphi abantwana abafayo ngenxa yokungafumani kugonyo
Eyona pilisi yolawulo lokuzalwa kwintengiso
lide kangakanani isicwangciso b elungileyo
zithini iimpawu zokuba unesifo seswekile
usulelo lwesifo segwele kunyango lwekhawuntari
yintoni ongayithatha kwi-hangover